Okporo mmiri gị Video Editor maka otu n'ime ndị a na Audio Synching | Martech Zone
N'izu gara aga a, m na-arụ ọrụ na ịzigharị akaebe ndị ahịa maka onye ahịa. Onye vidio a ha na ya rụkọtara ọrụ dị egwu, na-enye ha vidiyo na vidiyo niile na mmemme ha chọrọ ịgbakọta vidiyo n'ọdịnihu. Ha kesara m raw MXF faịlụ ahụ ka m wee budata ha ma achọpụtara m ozugbo na m karịrị isi m.
Echere m bụ na m na-aga igosipụta vidiyo ndị dị na iMovie, kpọkọta mkparịta ụka ahụ, tụba m Intro, mpụga, na egwu egwu na ha, wee mee. Agbanyeghị, onye ọrụ vidiyo ọkachamara ahụ nwere ọtụtụ akụkụ site na igwefoto dị iche iche… naanị otu echiche nwere ọdịyo kacha dị elu. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye pro, mana ọ karịrị isi m.
Na iMovie ma ọ bụ Windows Movie Maker, M naanị otu video usoro iheomume. Yabụ, agara m edozi igwefoto igwefoto ọ bụla n'ụzọ zuru oke, wee gbalịa dakọtara vidiyo na egwu egwu - ọrụ na-agaghị ekwe omume. Na enweghị akụkụ igwefoto ọzọ, vidiyo ahụ agaghị enwe mmetụta. Oge ịkpọ pro!
My videographer nwere ebe a na-eme ihe nkiri dị n’akụkụ ọfịs ụlọ m, ya mere, m rutere ma soro ya kwurịta ihe m ga-eme. Ọ kụziiri m ngwa ngwa na njedebe nke nghazi ngwanrọ vidiyo ma gosi m otu ọ ga - esi tinye ọtụtụ egwu vidiyo ma ọ bụ egwu egwu dị iche na nchịkọta akụkọ ya ma mekọrịta ha site na ịpị bọtịnụ ahụ.
AJ kesara ụfọdụ nchịkọta nchịkọta vidiyo kacha amasị AJ nke na-enye Ngakọrịta mmekọrịta:
Adobe Premiere Pro - nke ahụ bụ nseta ihuenyo dị elu nke sọftụwia edezi vidiyo kacha amasị AJ. Premiere Pro bụ ngwanrọ na-edezi vidiyo maka ihe nkiri, T, na Weebụ.
Onye mmebe ihe na mbu - AVID bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ na-eduga maka ịdezi ihe nkiri, Ihe ngosi, na Ahịa. Eziokwu ahụ bụ na ha mere nsụgharị efu bụ nnukwu! (AJ bụkwa AVID gbaara)
Hitfilm Express - Hitfilm awara awara bụ the indy's indy editor. O nweere onwe ya ma ọ bụghị naanị onye editọ (dị ka nke izizi) kamakwa ọ bụ onye na-ede akwụkwọ (After Effects) AJ na-atụkarị aro ka nke a bụrụ ihe ọzọ n'efu.
Onye nchịkọta akụkọ vidiyo FilmoraPro - M na a na-eji Wondershare si akakabarede omume na ọ na-arụ ọrụ flawlessly. M doro anya na ha oké ọnụ video edezi ngwugwu dị nnọọ ka mma - na ọ na-enye audio mmekọrịta dị ka mma.
Mmekọrịta ọnụnụ nwere ike iji egwu ọ bụla were egwu ma dakọtara ebili mmiri ahụ n'ụzọ zuru oke, ọbụlagodi na ogo ọdịyo adabaghị. N'okwu a, enwere m otu vidiyo vidiyo nwere ọdịyo zuru oke, yana nke nwere ihe ọ bụla igwefoto bulitere. Akụrụngwa ahụ gosipụtara ma dabara na egwu vidiyo n'ụzọ zuru oke. Yabụ, AJ nwere ike tụgharịa akụkụ igwefoto ma mekwaa usoro ọdịyo dị mma.
N’ime nkeji ole na ole, AJ kwadebere vidio ahụ nke m gbalịrị ịrụ ọrụ ọtụtụ awa. Nke a mere n'ezie ka m chegharịa iji iMovie maka edezi vidiyo m. Na nke m Adobe Creative Cloud ikike, m nwere ike ibudata na-amụta Premiere Pro… otú ahụ ka m chere na ọ bụ oge m kwalite!
Yabụ ma ọ bụ ọtụtụ vidiyo vidiyo nwere nke nwere ọdịyo zuru oke, ma ọ bụ ọtụtụ obere vidiyo na yana mgbakwunye vidiyo sitere na onye na-edekọ ihe gị ages nchịkọta ndị a ga - emekọrịta ma ọdịyo na obere vidiyo ka ị ghara inwe!
Na, na otutu video usoro iheomume, ị nwere ike mmezi na họrọ na echiche na ị chọrọ ime ka video ọzọ ọkachamara na mmetụta.
Mara: Ana m eji njikọta mgbakwunye m maka Adobe Creative Cloud.
Tags: adobe premiere proezigboandiwet mbụFilmora video nchịkọta akụkọntinye vidiyoWondershare